Haanta Shiinaha ayaa dusha ka saartay jaakad jimicsiga muruqyada ragga wax soo saar iyo warshad | ISAPPARELS
Taangiga ayaa dusha ka sarreysa dharka jimicsiga ee murqaha ragga
Qaabka: Taangiga ayaa dusha sare ka xirta dharka jimicsiga ee murqaha ragga
Waxaad ku dari kartaa nashqadeynta qaababkan waxaadna la jaan qaadi kartaa qalabka aad u baahan tahay si aad adigu iskaga dhigto mid ka duwan. 20 + naqshado cusub maalin kasta.Hoping with ISA, waxaad ka dhigi kartaa qaabeyntaada mid dhab ah oo aad ku guuleysataa suuqa; Ku soo dhowow shirkadda 'NC ISA' Warshadaha iyo ganacsiga. Waxaan ku siin doonnaa adeegga ugu fiican. Dhammaan dharka polyesterku wuxuu leeyahay dabacsanaan wanaagsan, dharkuna ma fududa in la laabo.Waxaa jaakadani ka samaysan tahay dhammaan-polyester dhar, iyadoo la adeegsanayo habka sublimation-ka kuleylka ah si aad ugu muujiso naqshadaada dharka.
Style ： cad
Dhar: 100% polyester
Koolar: Qoorta wareegsan
Sleeve: gacmo la'aan
Hore: Gym Shirt Ragga Jirdhiska Jimicsiga Orodka Taangiyada
Xiga: Dharka Basketball-ka ee Neefsashada Ragga
Shaqaalaha khaaska ah ee taangiga jimicsiga ...
100% taangiga ragga ugu sareeya
Ciyaaraha ragga ...
Taangiga xagaaga xaga sare ragga